Sina sy orinasa mpanamboatra trondro am-bifotsy | Hanketo
Ny trondro am-bifotsy dia karazana vonona hihinana vokatra am-bifotsy vita amin'ny trondro vaovao na mangatsiaka amin'ny alàlan'ny fanodinana, fanjanahana, zava-manitra, famehezana ary fanamorana. Ny tsipika famokarana trondro am-bifotsy dia ahitana fitaovana fanodinana akora, fitaovana fanasoketana, fitafiana fitafiana, fitaovana fandefasana volo
Famehezana mitovy. Araka ny fomba fanodinana samy hafa, ny trondro am-bifotsy dia azo zaraina ho voadidy, ranom-baranjely, nendasina, alefaina, setroka, alemana ao anaty menaka, notampohan-drano sns. Fahita, ranomasina, ranomasina, ranomasina, salmon, anisan'izany ny salmona.
Ny halavan'ny trondro am-bifotsy dia mahatratra 24 volana, izay heverin'ny mpanjifa maro fa vokatry ny fitehirizana. Io dia tsy. Ny sakafo am-bifotsy dia karazana fomba fanodinana sakafo manan-danja, izany hoe, ny akora apetraka ao anaty fitoeram-baravarana mihidy miaraka amin'ny etona mandrehitra ary tsaboina amin'ny hafanana avo, izay mety hahafaty ny karazan-javamananaina sy bakteria, manimba ny asan'ny anzima, manakana ny ivelany ny fandotoana sy ny oksizenina tsy hiditra, mba hitazomana ny sakafo haharitra sy hohanina mandritra ny fotoana maharitra. Noho izany, ny ankamaroan'ny trondro am-bifotsy dia tsy asiana preservatives, afaka matoky ny mpanjifa fa hihinana.
Ho fanampin'ny fanaraha-maso hentitra ny fisafidianana ny akora, ny fomba fanodinana ary ny fanamorana ny asa, ny orinasan-tsakafo am-bifotsy dia tokony hanao asa tsara koa amin'ny asa famonoana otrikaretina sy fanamontsam-bidy ao amin'ny efitrano fitehirizana akora, atrikasa famokarana ary atrik'akitra fandefasana azy ireo hitazomana am-bifotsy sy mihidy ao anaty tontolo steril. Raha jerena ireo fepetra takiana amin'ny sterilization avo lenta momba ny sakafo am-bifotsy, dia mety ny mampiasa ny teknolojia fanamorana sy fanamorana sterilization farany be indrindra, izany hoe ny sterilization mitohy sy ny fanamorana mandritra ny fanatrehan'ny olona, ​​izay tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​ary manonitra ny lesoka amin'ny asynchrony amin'ny ozone, taratra ultraviolet ary famafazana zava-mahadomelina taloha. Izy io dia mampiasa ny efitrano mpamorona nicoler farany farany hamoronana sehatra electrostatic plasma bidirectional dingana telo. Amin'ny famokarana plasma be dia be, afaka mamono tanteraka ny bobongolo sy ny bakteria amin'ny rivotra sy ny bakteria ataon'ny mpiasa izany. Avy eo, dia atambatra ireo singa toy ny karbaona voafafa amin'ny zava-mahadomelina ho an'ny fanafoanana sy fanivanana faharoa. Aorian'ny fitsaboana, misy rivotra madio be dia be mivezivezy ary mikoriana haingana, mitazona ny tontolo voafehy ao amin'ny fenitra "tsy misy volo sy tsy misy vovoka" dia afaka mahatsapa ny vokatra mitovy amin'ny "miasa sy ny famonoana otrikaretina amin'ny fotoana iray", ary mifehy ny fandotoana faharoa ny zavamiaina bitika amin'ny dingan'ny famokarana sy famenoana sakafo. Vao tsy ela akory izay, dia nampiasaina tsikelikely tamin'ny fandraharahana, ny fonosana ary ny famenoana ny indostrian'ny sakafo. Ankoatry ny fitazonana ny tontolon'ny aseptika amin'ny atrikasa famokarana sy fandotoana, ny fanadiovana ny akora dia dingana iray manan-danja ihany koa amin'ny fizotry ny fanjanahana. Ny fanadiovana dia tsy manala ny tany sy ny loto eny ambonin'ny akora tsotra ihany, fa mampihena ihany koa ny zavamiaina bitika ambonimbony. Noho izany, ny rano fanadiovana dia tsy maintsy madio sy madio.
Previous: Nanamboatra labiera vaovao ny tenany
Manaraka: Fitaovana an-dakozia
Andalana famokarana trondro anaty trondro
Masinina fanodinana vatomamy mafy
Fitaovana vatomamy malefaka